बन्ने भयो रोकिएको राप्ती पुल - Pradesh Today बन्ने भयो रोकिएको राप्ती पुल - Pradesh Today
बन्ने भयो रोकिएको राप्ती पुल
जेठ ०९, २०७५ प्रियास्मृती गजमेर
देउखुरी, ८ जेठ ।
लामो समयदेखि रोकिएको लमहीको मध्यनगरदेखि गढवाको भोजपुर जोड्ने झोलुङे पुलको काम फेरि सुरु हुने भएको छ । आयोजनाको पाँच प्रतिशत रकमबाट तत्काललाई तटबन्ध गर्ने सहमति भएपछि निर्माण कार्य सुरु हुने भएको लमही नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष गणेशमान चौधरीले जानकारी दिए । नयाँ बन्ने योजनालाई असर पर्ने स्थिति देखिएमा पुरानो संरचनालाई भत्काउन सकिनेसमेत सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी पुल रहेको स्थानको दायाँतर्फ कटान भएको क्षेत्रमा तटबन्ध गर्नका लागि लमही नगर कार्यपालिकामा निर्णय गराई नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, त्यहाँका स्थानीय, सस्पेन्सन ब्रीजका आयोजना प्रमुखसहितको टोली सम्बन्धित मन्त्रालयमा डेलिगेशन जाने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी काम गर्दा निर्माण कम्पनीले वडा प्रमुख र स्थानीयसँग समन्वय गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने र निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिने सहमति भएको छ । स्थानीयसँग कुनै समन्वय नगरेर र राप्ती पुलमा बन्न लागेको पुलको दुरी छोटो भएकोले स्थानीयले काम रोकेका थिए । केन्द्रीय बजेट अनुरुप दुई महिना अघि राप्तीमा पुल निर्माणको काम सुरु भएको थियो तर काम सुरु भएको लगत्तै स्थानीयले अवरोध गरेपछि पूर्णरुपले काम ठप्प भएको थियो ।
स्थानीयस्तरमा काम गर्दा कसैसँग पनि सहकार्य नगरेर काम गर्दा अवरोध आएको हो वडा अध्यक्ष गणेशमान चौधरीले बताए । एक करोड ९८ लाख कुल बजेटको लागतमा निर्माण हुन लागेको पुलको अहिलेसम्म वारी र पारीतर्फ पिलर उठाउने मात्र काम भएको छ । प्राविधिक टोली सातसय मिटर सर्भे गरेको थियो । पुल २ सय ६८ मिटरको दुरीमा बन्दैछ । राप्तीमा बाढी आउँदा वारपार हुने भएकोले त्यति दुरीको पुलले कुनै अर्थ नराख्ने स्थानीय जोगराज चौधरीले बताए । उनका अनुसार कम्तिमा पनि साढे सात सय मिटरको लम्बाईमा पुल हुन्थ्यो भने हामी राप्तीमा आउने बाढीबाट बच्न सक्थ्यौँ, लमही–६ का कान्तु चौधरीले भने योजनाले राहत दिन्छ भन्ने लागेको छ ।
स्थानीयस्तरमा आएका विकासका पूर्वाधारलाई अवरोध गर्न खोज्नु मूर्खता भएको गढवाकी उर्मिला चौधरीले बताइन् । कसैलाई पनि अप्ठेरो नपारेर काम हुनुपर्दछ, हामीलाई बर्षामा कति गाह्रो हुन्छ ? डुङ्गाबाट नदी तर्दा कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिँदैन ? त्यसैले यो ठाउँमा पुलको आवश्यकता छ, चौधरीले भनिन् ।
त्यस्तै मध्यनगरका केही स्थानीयले पुल बनाउँदा जग्गा मिचिएको गुनासो गरेका छन् । करिब बाउन्न जना किसानको जग्गा मिचिएको एक स्थानीयले बताए । ‘कम्तिमा पनि काम गर्दा हामीलाई पनि जानकारी गराएको भए हुन्थ्यो जानकारी नगराउँदा अन्यौल भएको हो’ उनले भने । तर प्राविधिकको टोलीले काम सुरु गर्दा स्थानीयसँग बसेर छलफल गरेर प्रक्रियागत रुपले मात्र काम अघि बढएको दाबी गरेको छ । स्थानीयले हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् ब्रीज आयोजनाका प्रमुख गुरुप्रसाद शर्माले भने ‘निर्माणमा नीतिभन्दा बाहिर गएका छैनौँ ।’
सहकारी तथ्याङ्क एकीकरण अभियान
बिबिएसमा ज्ञानदिप उत्कृष्ट
के साँच्चै दशैँ आएकै हो ?